कोरोनाका कारण युवकको मृ’त्यु भएको नरैनापुरका बासीन्दा २ सय ६३ जनाको रिपोर्टको पर्खाइमा, के गर्दैछ सुरक्षा संयन्त्र ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरोनाका कारण युवकको मृ’त्यु भएको नरैनापुरका बासीन्दा २ सय ६३ जनाको रिपोर्टको पर्खाइमा, के गर्दैछ सुरक्षा संयन्त्र ?
नेपालगन्ज, ५ जेठ । चारैतरि माहोल सुनसान छ, अत्यावश्यक पसलहरुमा सतर्कताका उपाय बढाइएको छ, प्रहरी गस्ती चारै तिर छ, गाउँमा हिंडडुल गर्नेको संख्या एक्कासी कम भयो, अधिकाँशको प्रतिक्षा र ध्यान २ सय ६३ जनाको रिपोर्टमा केन्द्रित छ । बाँकेको नरैनापुरमा रहेका पत्रकार विनय दिक्षितले दैनिक नेपालगन्जमा लेखेका छन् ।
बाँके नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं।५ स्थित क्वारेन्टाइनमा आइतबार विहान एक युवकको मृ त्यु भएपछि नरैनापुर क्षेत्रमा त्रा सको माहोल छ । मान्छेहरु घर भित्रै छन् । एकापसमा संकलित स्वाबको रिपोर्ट आउने बारे जिज्ञासा राख्दै आएको पाइयो ।
गतसाता बुधवार भारतको मुम्बईबाट आएका नरैनापुर ५ बस्ने युवकको क्वारेन्टाइनमा राति ३ बजे मृ त्यु भएको थियो । युवकको अन्त्येष्टी प्रत्यक्ष हेरेका स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, यो निकै कठिन समय हो ।
डोजरबाट शव ब्यवस्थापन गर्ने दिन हाम्रै गाउँमा आउँछ यो कल्पना समेत थिएन, नरैनापुर ५ का वडा अध्यक्ष कृष्णचन्द्र मौर्य भन्छन्, केहि ब्यवस्थापकीय समस्या भएपछि सं क्रम णको जोखिम गाउँपालिका क्षेत्रमा बढि छ ।
शनिवार २ सय ६४ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा मृ त्यु हुने युवक पोजिटिव देखिएपछि समस्या बढ्न सक्ने स्थानीय स्तरमा अनुमानहरु गर्न थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, ब्यवस्थापन हेर्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबैमा एकखालको त्रा सको वातावरण रहेको पाइयो ।
यसअघि हाम्रो क्षेत्रमा सं क्रम ण हुन नसक्ने दावी गरिरहेका ब्यक्तिहरु बाहिर निस्कन छाडेका छन् । गाउँ क्षेत्र सुनसान छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका ७ सय १८ जनाका परिवार त्यहाँको ब्यवस्थापनबाट चिन्तित छन् ।
नरैनापुर ५ मा रहेको कृष्णा प्राविको क्वारेन्टाइनबाट आइतबार साँझ भाग्ने प्रयास भएको थियो, नरैनापुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले भने, हामीले सम्झाउने र ब्यवस्थापन अझ चुस्त पार्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
घटनाका कारण अधिकाँश अभिभावक चिन्तित छन् । दांगमा भर्ना रहेका कोरोना संक्रमितकी आमाले भनिन्, फोन सम्पर्क पनि हुन सकेको छैन । उनीहरुको अवस्था बारे चिन्ता भैरहेको बताउँदै उनले सम्पर्क हुन नसकेको बताइन ।
गाउँपालिका अध्यक्ष ईस्तियाक अहमद शाहले आइतबार साँझ नै आपतकालिन बैठक आयोजना गरि क्वारेन्टाइन र ब्यवस्थापकीय पक्षमा हुन सक्ने सुधार बारे पहल गरेका छन् ।
३ जना चिकित्सक र एम्बुलेन्स सहितको टोली २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएकोछ, सूचना प्रदान गर्नका लागि सबै क्वारेन्टाइनमा सम्पर्क नम्बरहरु छाडिएको छ, कुनै प्रकारको चुक हुन दिने छैनौं, अध्यक्ष शाहले भने, चिकित्सकले गरेको कार्य बारे अनुगमन गर्न तथा ब्यवस्थापन पक्षमा सहयोग गर्न सूचना अधिकारी मिश्राको नेतृत्वमा अर्को टोली पनि परिचालन गरिएको छ ।
जसले बनाए मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको मुर्ति
नेपालमा अहिले भएको मृ’त्यु को’रोनाका कारण होइन, तर भन्नु परेको छ : प्रधानमन्त्री ओली